အကောင်းဆုံးလက်ဖြင့်ရောင်းချရန်လက်ဖြင့်လည်ပတ်သောလက် crank ပြောင်းအခွံ
လက် crank ပြောင်းခွံသည်သေးငယ်သောစက်ယန္တရားတစ်ခုဖြစ်ပြီးလက်ဖြင့်စွမ်းနိုင်သည့်ပြောင်းကိုကြိတ်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်,အရာရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံမှာအပေါ်ပါရှိပါတယ်,ခြွေလှေ့နှုန်းမြင့်,ကိုင်တွယ်အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီးကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်လည်းပါရှိသည်။ လက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပြောင်းဖူးခွံသည်စိတ်ချရပြီးလုံခြုံစိတ်ချရသည်။ ၎င်းသည်ပါဝါမှထိန်းချုပ်မှုမရှိသောကြောင့်,ဒါကြောင့် use.the လက်ပြောင်းပြောင်းဖူးခွံကိုအသုံးပြုခြင်းကပိုပြီးအဆင်ပြေပါတယ်။ အသေးစားလယ်ယာများ၏ပြောင်းဖူးလိုအပ်ချက်အတွက်များစွာသင့်လျော်သည်။ ဒီဇယ်နှင့်လျှပ်စစ်ကဲ့သို့စွမ်းအင်လိုအပ်သည်။ ဤအရည်အသွေးရှိသောလက် crank ပြောင်းအခွံသည်ပြောင်းတစ်လုံးလုံးမှဂျုံစေ့အားလုံးကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ နားရွက်! လက်တံ cran အလွယ်တကူလှည့်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုနှုန်းတစ်နာရီခွံပြောင်းဖူး၏တဆယ်ငါးဆယ့်ငါးhelhelဖြစ်ပါတယ် (အကြောင်း 10 ပြောင်းဖူးနားကိုစက္ကန့်။) နားရွက်အရွယ်အစားများနှင့်ပုံစံများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်, ချောမွေ့များအတွက်နွေ ဦး တင်းမာမှုနှင့်အတူ, တသမတ်တည်းအစာကျွေး.
1.ကုန်ထုတ်စွမ်းအားသည် ၃၀၀ မှ ၄၀၀ ကီလိုဂရမ် / နာရီဖြစ်သည်,ပိုလျှံမှုနှုန်းထက်ပိုသည် 98% 2.ကျေးဇူးပြု၍ စွဲစေခြင်း၏လုံခြုံမှုနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကိုစစ်ဆေးပါ ,ကျေးဇူးပြုပြီးနွေ ဦး ကိုချိန်ညှိပါ,မလွန်းဘူး ,မလည်းတင်းကျပ်စွာ) 3.လက်ကိုင် crank ပြောင်းဖူးသေတ္တာစက်ကိုကောင်းစွာနေရာ ချ၍ ၎င်းကိုမရွှေ့ပါနှင့်။,လက်ဝဲလက်ဖြင့် Cranking Bar ကိုကိုင်ထားပါ,စက်တွေပါးစပ်သို့ပြောင်းဖူး ဦး ခေါင်းထား၏ , ပေါ့ပေါ့တန်တန်နှိပ်လိုက်ပါ ,ထို့နောက်သင်၏ဘယ်ဘက်လက်ကိုအင်အားဖြင့်လှုပ်ပါ,ပြောင်းဖူးစပါးခြွေလှေ့ cl- လက်စွဲစာအုပ်ပြောင်းဖူးခြုံခြုံကြလိမ့်မည်.
လက် parameter သည်ပြောင်းဖူးခွံ crank